सेक्स पश्चात निद्रा आउनु सहि या गलत ? जानौं.. - Saptakoshionline
सेक्स पश्चात निद्रा आउनु सहि या गलत ? जानौं..
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख १९, २०७६ समय: १४:२०:०७
सेक्स पश्चात तपाईंको पार्टनर सुत्नु सामान्य हो वा अन्य कारण त्यसको बारेमा प्रायले सोच्ने गर्दैनौं । के यो सामान्य हो वा कहिले काही सेक्सको थकान २४ घन्टा सम्म रहिरहन्छ ? कतिपय महिला यो प्रश्नको उत्तर खोजि नै रहन्छन् । सेक्स पश्चात सुत्नु राम्रो हो वा गलत ? जानौं…
प्रायःजसो मानिसहरु सेक्स रातिको समय गर्ने गर्छन् । त्यो समय सम्म मानिस थाकि सकेको हुन्छ । सेक्स पश्चात सुत्नुको पहिलो कारण यहि नै हो । सेक्स रिल्याक्स गर्ने एक प्रक्रिया हो जस कारण यस्तो हुने गर्छ । त्यहि महिलाको शरीर पु
मुडलाई रिफ्रेश गर्नका लागि सबैभन्दा राम्रो फल हो अंगुर । त्यसमा पनि फ्रिजबाट निकालिएको अंगुरको सेवन यौन सम्बन्धपछि खानाले तपाईंको मुडलाई तुरुन्तै रिफ्रेश गर्ने काम गर्छ ।
रुषको ठिक विपरित प्रतिक्रिया दिन्छ । अर्गेज्मले उनलाई उत्तेजित बनाउँछ र उनलाई बढि माया गर्ने मन हुन थाल्छ ।